xForex ကဘာတွေဖြန့်သလဲ LOW Spread ပွဲစားများအတွက်ဇန်နဝါရီ 2022 လမ်းညွှန်
Forex တွင်ဘာပျံ့နှံ့နေသနည်း။ အနိမ့် Forex ပြန့်နှံ့မှုလမ်းညွှန်ကိုရှာဖွေ 2021
သင်တစ် ဦး တည်း Forex pair တစုံမရောင်းသေးလျှင်ပင် Forex ပြန့်ပွားခြင်း, သင်သည် 'ပြန့်ပွား' 'အကြောင်းကိုကြားဖူးရဖွယ်ရှိသည်။ ၎င်း၏အခြေခံအကျဆုံးပုံစံအရပြန့်ပွားခြင်းသည် Forex pair တစုံ၏“ ၀ ယ်ခြင်း” နှင့်“ ရောင်း” စျေးနှုန်းတို့၏ကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။
ဒီပြန့်ပွားမှုဟာသင်ကုန်သွယ်မှုအတွက်သွယ်ဝိုက်ပေးဆောင်နေတဲ့အခကြေးငွေနဲ့သက်ဆိုင်တယ်။ ဒါကအွန်လိုင်း Forex ပွဲစားတွေကငွေရှာပုံပါပဲ။ 'pips' အရေအတွက်ကိုတွက်ချက်သည်၊ ပြန့်ပွားမှုတင်းကျပ်လေ၊ ကုန်သည်တစ် ဦး အနေဖြင့်သင့်အတွက် ပို၍ အကျိုးရှိသည်။
ပြန့်ပွားမှုဆိုတာဘာလဲနှင့်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုပိုမိုရှာဖွေရန်စိတ်ကူး? ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည့်စုံလမ်းညွှန်ကိုဖတ်ရှုဖို့သေချာပါစေ Forex တွင်ဘာပျံ့နှံ့နေသနည်း။
မှတ်ချက်။ ။ အချို့သော Forex ပွဲစားများကသူတို့၏အဓိကအတွဲများပေါ်တွင်အလွန်တင်းကြပ်စွာပြန့်ပွားမှုကိုကမ်းလှမ်းသော်လည်းကော်မရှင်၏ပမာဏကိုသင်အကဲဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ အနိမ့်ကျတဲ့ပွဲစားကိုသုံးပြီးအားလုံးကောင်းတယ်၊ ကောင်းတယ်။
တစ်အတိုချုပ်ထဲမှာ, အ ပျံ့နှံ့ Forex pair တစုံ၏ ၀ ယ်ယူသည့်ဈေးသည် theell ၏ဈေးနှင့်ကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။ ဤသည်ကစျေးကွက်သွားသည့်လမ်းမည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ Forex ပွဲစားသည်အမြဲတမ်းအမြတ်အစွန်းရရှိရန်သေချာစေသည်။
ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုသည် Forex လောကတွင်အရေးကြီးသောစကားပြောသောအချက်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်သင်ကုန်သွယ်မှုအတွက်မည်မျှပေးဆပ်ရသည်ကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင်ပြန့်ပွားမှုမြင့်မားလေ၊ အခကြေးငွေများကိုသွယ်ဝိုက်ပေးဆောင်လေလေဖြစ်သည်။
ပြန့်ပွားမှုကို 'pips' တွင်မည်သို့တွက်ချက်သည်ကိုလေ့လာခြင်းမပြုမီ၊ မြူခိုးရှင်းလင်းရန်အခြေခံဥပမာကိုကြည့်ကြစို့။
သင် USD / CAD ရောင်းဝယ်နေပါတယ်
မင်းရဲ့ပွဲစားက“ ၀ ယ်” တဲ့ဈေးနှုန်းကို ၁.၃၁ ကိုးကားတယ်
ရောင်းရန်ဈေးသည် ၁.၃၁၀၄ ဖြစ်သည်
ဆိုလိုသည်မှာ ၀ ယ်ရောင်းရောင်းဈေးသည် ၀.၇၆% ဖြစ်သည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း USD / CAD တွင် ၀ ယ်ရန်အမှာစာကိုသင်ထားပါကစျေးနှုန်းမြင့်တက်မှုအပေါ်သင်ယုံကြည်မှုရှိပါကသင်သည် ၁.၃၁ ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ အော်ဒါမှာပြီးသည်နှင့်သင်အနီရောင် ၀.၇၆% ရလိမ့်မည်။
အဘယ်ကြောင့်? ကောင်းပြီ၊ မင်းရဲ့ရာထူးကိုရောင်းချင်ရင်မင်းကို ၁.၃၀ မှာလုပ်ရမယ်။ ၎င်းသည်သင်ပေးဆောင်ရသည့်ပမာဏထက်နည်းပါးသောကြောင့်အမိန့်သည်သင်ချက်ချင်းမှာယူသည်နှင့်ချက်ချင်းအားနည်းချက်ရှိနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်နိမ့်တဲ့ Forex spreads Forex ပွဲစားကိုရွေးချယ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
Forex ရှိ Pips တွေကဘာတွေလဲ။
ပြန့်ပွားမှုအကြောင်းနှင့်မည်သို့တွက်ချက်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အပြည့်အဝနားမလည်မီကျွန်ုပ်တို့ ဦး စွာလေ့လာသင့်သည် 'pips' အကြောင်းပြချက်ကတော့ပြန့်ပွားမှုရဲ့အကျယ်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်၊ လိုအပ်ချက် pips အတွင်းစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုတွက်ချက်ရန်နိုင်။
ပထမဆုံးနှင့်အရေးအကြီးဆုံးမှာကျွန်ုပ်တို့သည် Forex ကိုအွန်လိုင်းကုန်သွယ်သောအခါ၊ ပုံမှန်အားဖြင့်အလွန်သေးငယ်သောစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများမှအမြတ်ထုတ်ရန်သာဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, များစွာသော Forex အတွဲဒdecimalမအမှတ်ပြီးနောက်ဂဏန်းလေးခုဆံ့မည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ GBP / USD ကို ၁.၃၁၀၃ ဖြင့်စျေးနှုန်းသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဤနည်းဥပဒေမှခြွင်းချက်အနည်းငယ်ထဲမှတစ်ခုမှာ USD / JPY ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဒdecimalမပြီးနောက်ဂဏန်းနှစ်ခုသို့သာသွားသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ GBP / USD ကို 1.310 ကနေသွားလျှင်3 1.310 မှ4ဒါကအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၀.၀၀၀0.0001 ကိုပြလိမ့်မယ်။ Forex ဝေါဟာရများလောကတွင်၎င်းကို '1 pip' ဟုရည်ညွှန်းသည်။ အလားတူစွာ GBP / USD ၏စျေးနှုန်း 1.31 ကနေသွားလျှင်03 1.30 မှ98, ဒီ '5 pips' ၏လှုပ်ရှားမှုဖြစ်လိမ့်မည်။
Pips အတွက် Spead တွက်ချက်
ဒီတော့အခုဘာကိုသိလဲ ပျံ့နှံ့ ဘယ်လိုအဖြစ် pips တွက်ချက်ခြင်း၊ ယခုကျွန်ုပ်တို့ပြန့်နှံ့ခြင်း၏လက်တွေ့ကျသောဥပမာတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ပြနိုင်သည်။
Pips ဥပမာ: EUR / USD ၏ပျံ့နှံ့
မင်းတို့က EUR / USD ကိုရောင်းချင်တယ်၊ မင်းကမင်းကိုရှည်အောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုပါစို့။ ထို့ကြောင့်ယူရိုသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာထက်သာလွန်မည်ဟုသင်ယုံကြည်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာငွေလဲနှုန်းကတက်သွားလိမ့်မည်။
၀ ယ်ယူသည့်စျေးနှုန်းမှာ ၁.၃၁၀၀ ဖြစ်သည်
ခြားနားသောဂဏန်း ၇ လုံးနှင့်ပြန့်ကားခြင်းသည် ၇ စက္ကန့်ဖြစ်သည်
၀ ယ်ရန်အမှာစာကို ၁.၁၃၈၉ မှာထားတယ်၊ ဆိုလိုတာကအနည်းဆုံး ၇ pips တိုးဖို့အတွက်ယူရို / အမေရိကန်ဒေါ်လာစျေးကိုမြှင့်တင်ဖို့လိုတယ်၊
အပေါ်ကဥပမာမှာတွေ့ရသလို ၀ ယ်စျေးက ၁.၁၃၈၉ ဖြစ်ပေမယ့်မချိုးခင်တောင်မှရောင်းဈေးက ၁.၁၃၈၉ အထိတိုးမြှင့်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။ ဤစျေးနှုန်းမရောက်ရှိမီသင်ကုန်သွယ်မှုမှသင်ပေးခဲ့သည့်ငွေထက်နိမ့်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ထွက်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
Forex ရှိပိုက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကော။
သငျသညျကိုထပ်မံရှုပ်ထွေးရန်ရည်ရွယ်ခြင်းမရှိဘဲ, သငျသညျလညျး 'pipettes' ဆိုတာဘာလဲနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ pips များနှင့်ဆင်တူသည်မှာ pipetti သည် Forex pair ၏အလွန်သေးငယ်သောစျေးနှုန်းများနှင့်ဆက်စပ်သည်။ သို့သော် pips များသည်ဒtheမ (ပြီးနောက် USD / JPY အတွက် ၂ ခု) မှဂဏန်း ၄ လုံးကိုအခြေခံထားသော်လည်း pipetti သည်ဂဏန်း ၅ လုံးကိုအသုံးပြုသည်။
ဥပမာ GBP / USD ကို ၁.၄၅၉၂ (ဂဏန်း ၄ လုံး) ဖြင့်အစားထိုးမည့်အစား၊ ၁.၄၅၉၂၇ (၅ ဂဏန်း) လိုမျိုးဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်၊ pipette ၁ ခု၏ ၀ င်ငွေသည် ၀.၀၀1.4592 ဒေါ်လာဖြစ်သည်။ ရှုပ်ထွေး? မဖြစ်သင့်ပါ၊ တွက်ချက်မှုသည် pips များနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည့်တိုင်ဂဏန်းအပိုတစ်ခုထပ်ထည့်နေသည်။
ပိုက်လိုင်းဥပမာ: GBP / USD ၏ပျံ့နှံ့
ဒီဥပမာမှာကြည့်ရအောင် ဘယ်လို ပွဲစားတစ် ဦး သည် pipetti အသုံးပြုသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည် GBP / USD ပေါ်တွင် Forex ပြန့်ပွားမှုကိုတွက်ချက်သည်။
ခြားနားသောဂဏန်း ၈ လုံးဖြင့်ပြန့်ပွားမှုသည် ၈ pipetti ဖြစ်သည်
၀ ယ်ရန်အမှာစာကို ၁.၃၁၀၁၆ မှာထားတယ်၊ ဆိုလိုတာကအနည်းဆုံး pipetti ၈ ခုတိုးပြီး GBP / USD ဈေးနှုန်းကိုတောင်ချိုးဖောက်နိုင်ဖို့လိုတယ်။
အထက်ပါဥပမာတွင် GBP / USD ၏ Forex ပြန့်ပွားမှုသည် ၈ pipetti ဖြစ်သည်။ သို့သော်ပွဲစားများသည်ပွဲစားတစ် ဦး သည် pipette စနစ်ကိုအသုံးပြုသည် (ဒdecimalမနောက်မှဂဏန်း ၅ လုံး) ရှိသော်လည်းပြန့်ပွားမှုကို 'pips' ဖြင့်အမြဲတွက်ချက်သည်။ ထို့ကြောင့်ပြန့်ပွားမှုသည် 8 pips ဖြစ်သည်။
မှတ်ချက် - ၀ ယ်လိုအားသာသည့် ၀ န်ဆောင်မှုကို ၀ ယ်ယူသည့်ပွဲစားကိုသင်ရှာနိုင်သည်ဆိုပါကအဓိက Forex အတွဲများ၌ ၀.၈ pips ကိုရရှိသည်။ သို့သော်မည်သည့်ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်များကိုသင်ပေးဆောင်ရန်လိုအပ်သည်ကိုသေချာစွာစစ်ဆေးပါ။
ဤလမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ကိုဖတ်ရှုပြီးပြီဆိုလျှင်၊ pips နှစ်ခုစလုံးတွင် Forex ပြန့်နှံ့မှုကိုသင်တွက်ချက်နိုင်ပြီဖြစ်သည် နှင့် ပုလဲ။ ပွဲစားသည်ဒdecimalမအမှတ်ပြီးနောက်ဂဏန်း ၅ လုံးကိုကမ်းလှမ်းလျှင်ပင်မမေ့မလျော့ပါနှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Forex ပြန့်ပွားမှုများကို pips များဖြင့်တွက်ချက်ဆဲဖြစ်သည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူယခုကျွန်ုပ်တို့သည် Forex ပွဲစားကိုအသုံးပြုသည့်အခါမည်သည့်အမျိုးအစားများကိုသင်ရည်မှန်းသင့်သည်ကိုလေ့လာသွားပါမည်။ ပထမ ဦး စွာအပြန့်ပွားအကျယ်ကိုနောက်ခံအရောင်းအဝယ်ပြုသူကဆုံးဖြတ်လိမ့်မည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ GBP / USD နှင့် EUR / USD ကဲ့သို့သောအဓိကအတွဲများသည်သင်ရွေးချယ်သောပွဲစားတွင်အမြဲတမ်းအနိမ့်ဆုံး Forex spreads ရှိသည်။ ထို့နောက်တွင် GBP / NZD ကဲ့သို့အရွယ်မရောက်သေးသူများနှင့် USD / TRY ကဲ့သို့သောထူးခြားဆန်းပြားသောအတွဲများသည်အကျယ်ပြန့်ဆုံးပျံ့နှံ့မှုရှိသည်။
ဤအဘို့အကြောင်းပြချက်ငွေဖြစ်လွယ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးစျေးကွက်သည်နေ့စဉ် GBP / USD တန်ဖိုးရှိပေါင်ထရီလီယံကိုတောင်းဆိုလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း USD / TRY ကြိုက်နှစ်သက်မှုများသည်ငွေဖြစ်လွယ်မှုမှမကြာခဏခံစားရလေ့ရှိသည်။ စျေးကွက်ဟာငွေဖြစ်လွယ်မှုအဆင့်နည်းနေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လာမှာပါလဲ။ မတည်ငြိမ်မှုမြင့်မားသည် ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, ထူးခြားဆန်းပြားအတွဲ၏ Forex ပြန့်ပွားမှုကြီးများထက်အမြဲသိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားပါလိမ့်မယ်။
အချို့ကိစ္စရပ်များတွင်ပွဲစားများသည်၎င်း၏အဓိကအတွဲများ၌သုညပျံ့နှံ့မှုကိုကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်။ သို့သော်ဤသည်ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ကျွမ်းကျင်သောကုန်သွယ်မှုအကောင့်ရှိသောသူများအတွက်သီးသန့်ထားရှိသည်။ ထို့အပြင်သုည Forex ပြန့်ပွားမှု Forex ပွဲစားသည်ကုန်သွယ်ချိန်အတွင်းသာ၎င်းကိုကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်။
ပြန့်ပွားမှုသည် Forex trading လောကတွင်အရေးကြီးသကဲ့သို့ဤသည်မှာပွဲစားအသစ်ဝင်ရောက်ရန်သင်၏အဓိကအကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါ။ ဆန့်ကျင်တွင်, သင်သည်အခြား variable တွေကိုတစ် ဦး အကွာအဝေးကိုကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ၎င်းတွင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ သင်ရောင်း ၀ ယ်နိုင်သောတူရိယာအရေအတွက်နှင့်၎င်းကိုထောက်ပံ့သည့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများပါ ၀ င်သည်။
သို့သော်သင်၏ကုန်ကျစရိတ်များကိုအနိမ့်ဆုံးအထိထားပါကနိမ့်ကျသောပြန့်ပွားမှုသည်အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းချိုသာသောပွဲစားတစ် ဦး နှင့်အမြဲမတူပါ။ ပွဲစားသည်စျေးကွက်အတွင်းအနိမ့်ဆုံးပြန့်ပွားမှုအချို့ကိုအမှန်တကယ်ကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းကော်မရှင်၊ သိုက်ကြေး၊
Forex ပွဲစားများသည်ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်အားအခကြေးငွေပေးရသည်။ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်သင်ရောင်းဝယ်သည့်ပမာဏ၏ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပွဲစားတစ် ဦး သည်ကော်မရှင် ၀.၃% နှင့်သင်၏ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုးသည်£ ၂၀၀၀ ဖြစ်ပါကသင်£ 0.3 ပေးရလိမ့်မည်။ သငျသညျများသောအားဖြင့်အမိန့်၏နှစ် ဦး စလုံးအဆုံးမှာကော်မရှင်ပေးဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သင်ပြန့်ပွားအပေါ်အချို့သောငွေစုဆောင်းနိုင်သည့်အခါဒါဟာအမြဲတမ်းကြီးလှ၏။ သို့ရာတွင်၊ အနိမ့်ကျသောပွဲစားကိုရွေးချယ်ခြင်းထက်ပိုဆိုးသည်မှာသင်ငွေသွင်းရန်နှင့်ငွေထုတ်ရန်သင့်အားငွေသွင်းပေးလိမ့်မည်ကိုသာရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းငွေပေးငွေယူအခကြေးငွေနှင့်အတူလာမရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
သင်ကသြဇာသက်သက်ကုန်သွယ်ရန်ရှာနေလျှင်ညအိပ်ရန်ငွေကြေးကိုသတိထားဖို့လိုလိမ့်မည်။ ဒါကပွဲစားဆီကပိုက်ဆံချေးတာပါ၊ ၂၄ နာရီတိုင်းမှာမင်းကနေရာကိုဆက်ထားတယ်။ ထို့ကြောင့်ပွဲစားတွင်သင်အလွန်တင်းကျပ်စွာပျံ့နှံ့မှုကိုပေးဆောင်နိုင်သော်လည်း၊ သင်သြဇာကိုလျှောက်သောအခါသင်ဤအတွက်ပေးချေလိမ့်မည်။
အကောင်းဆုံးအနိမ့်ပျံ့နှံ့ Forex ပွဲစား 2021
ဒါကြောင့်ယခုသင်ပြန့်ပွားခြင်း၏အဘယ်အရာကိုအပြည့်အဝနားလည်ပြီးရေရှည်တွင်အကျိုးအမြတ်များရရှိနိုင်ရန်သင်၏စွမ်းရည်အပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်ကြောင်းယခုကျွန်ုပ်တို့ထိပ်တန်း ၃ ပွဲစားပွဲစားရွေးသူများကိုစာရင်းပြုစုမည်။
Capital.com သည် FCA၊ CySEC၊ ASIC၊ နှင့် NBRB- ထိန်းညှိထားသော အွန်လိုင်းပွဲစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး ငွေကြေးဆိုင်ရာ တူရိယာများစွာကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ CFDs ပုံစံဖြင့် အားလုံးပါဝင်သည် - ၎င်းသည် စတော့ရှယ်ယာများ၊ အညွှန်းကိန်းများနှင့် ကုန်ပစ္စည်းများကို အကျုံးဝင်သည် ကော်မရှင်အတွက် တစ်ပြားတစ်ချပ်မျှ ပေးချေမည်မဟုတ်ပါ၊ နှင့် ဖြန့်ကြက်မှုသည် အလွန်တင်းကျပ်ပါသည်။ Leverage အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများကိုလည်း ကမ်းလှမ်းထားသည် - ESMA ကန့်သတ်ချက်များနှင့်အညီ အပြည့်အဝ။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ကိုတစ်လျှောက်လုံးဖတ်ပြီးပြီဆိုလျှင်သင်ပြန့်ပွားမှုဆိုတာဘာလဲ၊ သင်မည်သို့တွက်ချက်သည်၊ 'တင်းကျပ်သော' ပြန့်ပွားမှုများကိုကမ်းလှမ်းသောပွဲစားများနှင့်ကပ်ရန်အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသည်ကိုကောင်းစွာနားလည်ထားသင့်သည်။ ထိုသို့ပြောခြင်းဖြင့်သင်ပြန့်ပွားမှုအရွယ်အစားကိုအဓိကအားဖြင့် Forex ပွဲစားအသစ်ကိုဘယ်တော့မှရွေးချယ်သင့်သည်။
ဆန့်ကျင်တွင်, ပွဲစားပလက်ဖောင်း၏အခြားဒေသများရှိသင်အားသွင်းလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၎င်းတွင်ကော်မရှင်၊ ညအိပ်ငွေနှင့်ငွေသွင်း / ထုတ်ယူခများပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, အမြဲတမ်းလက်မှတ်ထိုးမတိုင်မီပွဲစားအပေါ်တိုးမြှင့်သုတေသနပြုပါ။